ထီဆုကြီး ကံထူးခဲ့ကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြခဲ့တဲ့ သားညီ – Suehninsi
အောက်တိုဘာလရဲ့ အစမှာ သားညီကတော့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အကြိမ်(၂၀) မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုပေးပွဲမှာ ထီ(၅) သောင်းဆု ပေါက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ” မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့ ခရီးတွေဟာလည်း ခြေတစ်လှမ်းက
စတာပါပဲတဲ့။ စိန်သားညီရဲ့ သိန်း 15000 ခရီးကတော့ ဦးဇော် နဲ့ အန်တီညူး တို့ ထီဆိုင်က ငါးသောင်းဆုနဲ့ စတယ်။ Thank you October !!!” ဆိုပြီးတော့ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီခွဲကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားတာ
ဖြစ်ပါတယ်။ သားညီဟာ ယခင်ကလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းတင်မက ဒါရိုက်တာဘက်ကိုပါ အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ကြိုးစားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဇာတ်ကားတော်တော်များများကို ဒါရိုက်တာ လုပ်လာပြီဖြစ်ကာ
ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေကပါ လက်ခံလာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ သားညီအနေနဲ့သရုပ်ဆောင် ဘဝမှာ ဖန်တီးခွင့်မရတာလေးတွေကို ဒါရိုက်တာ ဘဝမှာ ဖန်တီးခွင့်ရလာတယ်လို့လည်း ယခင်က အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုဖူးပါတယ်။
အောကျတိုဘာလရဲ့ အစမှာ သားညီကတော့ ကံကောငျးခွငျးတှေ ရောကျလာပွီလို့သိရပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ အကွိမျ(၂၀) မွောကျ အောငျဘာလေ သိနျးဆုပေးပှဲမှာ ထီ(၅) သောငျးဆု ပေါကျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ” မိုငျထောငျခြီဝေးတဲ့ ခရီးတှဟောလညျး ခွတေဈလှမျးက
စတာပါပဲတဲ့။ စိနျသားညီရဲ့ သိနျး 15000 ခရီးကတော့ ဦးဇျော နဲ့ အနျတီညူး တို့ ထီဆိုငျက ငါးသောငျးဆုနဲ့ စတယျ။ Thank you October !!!” ဆိုပွီးတော့ အောကျတိုဘာလ (၁) ရကျနေ့ ညနေ (၃) နာရီခှဲကြျောက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားထားတာ
ဖွဈပါတယျ။ သားညီဟာ ယခငျကလို သရုပျဆောငျပိုငျးတငျမက ဒါရိုကျတာဘကျကိုပါ အားကွိုးမာနျတကျနဲ့ကွိုးစားလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ဇာတျကားတျောတျောမြားမြားကို ဒါရိုကျတာ လုပျလာပွီဖွဈကာ
ဒါရိုကျတာတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှကေပါ လကျခံလာကွတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ သားညီအနနေဲ့သရုပျဆောငျ ဘဝမှာ ဖနျတီးခှငျ့မရတာလေးတှကေို ဒါရိုကျတာ ဘဝမှာ ဖနျတီးခှငျ့ရလာတယျလို့လညျး ယခငျက အငျတာဗြူးတှမှော ဖွဆေိုဖူးပါတယျ။
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမှတ်တရပုံလေးနဲ့ အဖေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြတဲ့ မြင့်မြတ်တို့ သားအဖ
ချင်းပြည်နယ်က ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကုန်အတွက် သိန်း(၃၀)လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ